Ukubhekwa kwevidiyo kungavikela kanjani ama-ATM ngokuhlaselwa ngokomzimba
I-ATM AEGIS iyindaba ebalulekile ebhekiswe yizinhlangano ezenziwa ngazo zonke izinhlangano ezinjenge-ATMIA (ATM Indikimba Association) ne-East (European ATM AGE AGISE) ....
I-ATM AEGIS iyindaba ebalulekile ebhekiswe yizinhlangano ezihlanganisa zonke ezinjenge-ATMIA (ATM Indikimba Inhlangano) ne-East (European ATM ANT AEGIS Team). Ukuhlaselwa kuma-ATM kunganqanyulwa ukuhlaselwa kokhonkolo, okubi kakhulu ku-Adtionness i-BankNote egcinwe ama-axial the atch ephephile noma imizamo ye-atch.
Ekuqaleni, ukuqala kuma-60s, i-concrete aegis yama-ATM yathuthukiswa. Ukuhlaselwa u-Anoni kwaqala, njengoba ama-ATM kusengaphambili mayelana nembulunga yonke, inani eliphelele le-banknote futhi lihlala endaweni efinyelelekayo. Kukhona amayunithi we-ASTBICE AMAHLA E-ATM, okuyi-Agency abangakwazi ukwenza ngcono i-operandi yabo futhi avele ngezindlela ezisheshayo ezivukelwe ngokushesha futhi ezingeziwe zokuphanga ama-ATM.
Ukubhekwa kwevidiyo kuhlanganiswe kakhulu kuma-vestibele e-ATM ku-Almanac futhi athole imizamo ye-arnac. Izesekeli zokubhekwa kwe-ATM ezifana namakhamera kanye namarekhodi adinga ukunyakaza ngezinto ezithile ze-anatomy zezingane futhi kwesinye isikhathi izimo zemvelo ze-ascruc.
Kunezidingo ezintathu ezibalulekile ezivela ezinhlelweni zevidiyo ezihanjiswa endaweni ye-cyberbanking. I-Aboriginal ihlanganisa ukuhlanganiswa, okuqinisekisa ukuthi ukukhiqizwa kokuthenjwa okuhlala kuhlala i-firewall evikelwe ngokungaguquki ku-datawall eqongelelwe, ku-ambiance akwazi ukuguquguquka ngezinsizakusebenza ze-coffer kanye nezinqubomgomo ezisebenzayo. Lokhu okungeziwe kungukuphathwa kwesenzo sesikhathi sangempela, ngakho-ke ukuthi izingqinamba zelungiselelo zingaziswa ngemizuzwana nje yokuhlelwa, futhi lokhu kuqinisekisa ukuthi ividiyo ivukile futhi isebenza ngaso sonke isikhathi. Ekugcineni, ukuphathwa okuphakathi okunika amandla ukuphathwa kwezikhwama zokurekhoda kusuka kwideskithophu yomuntu ngamunye endaweni eyodwa.
Kodwa-ke, ngaphandle kwenselelo ye-Abstruse, i-band-aid evunyelwe idinga ukuthi i-wactness ixhumene ne-database yebhange yokuthenga ukuze ikwazi ukuthola isixazululo se-aegis esiphelele. Izindaba zethu Zomhlangano WaseBand-Aid Zosizo kuma-ATM ngokuqoshwa kwevidiyo okuhlosiwe. Lapho ukuthengiselana okuthusayo kutholwa yibhange, ukwenziwa kwevidiyo kungaboshwa futhi kufinyeleleke ekuphenyweni kokufukula.
I-akhawunti eyengeziwe yelungiselelo levidiyo i-contalisescent ukusebenza kwebhange ukusebenza. Izici ezinjengokuthi abantu zibalwa, amacala obunwe / izikhathi, kanye nezikhathi zokuphumula ezivela kukhamera ye-megapixel kungaba ukuzalwa amadeshibhodi, ukusheshisa insizakalo, kanye nentshisekelo ye-chump.
PHAMBI Ingabe amarobhothi ikusasa lokuphepha?
Amahhotela angakhuphula kanjani ukuphepha OLANDELAYO